माघ ८ मा संविधान शङ्कास्पद परिस्थितिको निर्माण | Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
माघ ८ मा संविधान शङ्कास्पद परिस्थितिको निर्माण
२०७१ मंसिर २१, आईतवार ०३:२५ गते
दोस्रो संविधानसभा आफैँले तोकेको म्याद माघ ८ मा संविधान बन्ने कुरा पनि अन्ततः ठट्टामात्र सावित भयो । त्यसो त, पहिलो संविधानसभाले पनि पटकपटक आफ्नो म्याद थप गर्दै संविधान घोषणा गर्ने म्याद पनि पटकपटक तोकेको हो, तर ती म्याद कुनै पनि सफल भएनन् । एकछिनका लागि ज्योतिषशास्त्रलाई मान्ने हो भने तोकेको मिति शुभ रहेन । सायद, दलहरुको दशा–ग्रह मिलेको थिएन र अझै पनि मिल्ने स्थिति छैन । त्यसैले, दलहरुबीच दूरी बढेको
छ । सम्भवतः दलहरुले आफ्ना खराब दशा–ग्रहको स्वस्ति र शान्ति गरेनन् । स्वस्ति र शान्ति नगरेकाले त्यसको शिकारचाहिँ दलहरु मात्र भएनन्, माघ ८ पनि भयो । अब पनि दलहरुले आफ्ना स्वार्थका दशा–ग्रहको स्वस्ति र शान्ति गरेनन् भने माघ ८ पछि तोकिने अर्को कुनै ८ मा पनि संविधान बन्दैन ।
एकातिर एक दल र अर्को दलका बीचका दशा–ग्रह मिलिरहेका छैनन् भने अर्कातिर आफ्नै दलभित्रका झिनाझम्टीलाई पनि दशा–ग्रहले सताइरहेको छ । किन कुरा मिलिरहेको छैन ? किन संविधान बन्न सकिरहेको छैन ? बुझिनसक्नु छ । सम्भवतः दलका देखिने दशा एउटा छन्, नदेखिने दशा अर्कै छन् । त्यसैले, कुरा नमिलेको हो कि ? साना दलहरु भन्छन्– संविधान नबन्नुको कारण ‘सिन’मा देखिएका राज्य पुनर्संरचना, शासकीय स्वरुप वा न्यायप्रणाली होइनन् । बरू, संविधान जारी भएपछि राज्यका माथिल्लो निकाय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखजस्ता पदहरुमा ठूलो दलका भागबन्डा स्पष्ट हुन नसक्दाका परिणाम हुन् । संविधानसभा–१ को झैँ संविधानसभा–२ को पनि सत्तासँग लगनगाँठो कसिएकाले नै संविधान बन्धक बनिरहेको छ । तर, सर्वसाधारणले भित्रका यी कुरा थाहा पाउँदैनन् ।
सर्वसाधारणले समाचार माध्यममा सुनेअनुसार संविधानसभामा विवादित विषयमा सहमति गर्ने जिम्मेवारी पाएको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा विवादहरु सुल्झिएनन् । बरू, समितिले संविधानसभामा पठाउने प्रतिवेदनको ढाँचाका सम्बन्धमा विवाद बल्झियो । पहिलो संविधानसभा जे–जति कारणले विघटन हुन पुग्यो, दोस्रो संविधानसभाको एक वर्ष बितिसक्दा विवादका तत्तत् विषय ज्यूँका त्यूँ रहेका मात्र होइन, बरू पहिलो संविधानसभामा सहमति भैसकेको भनिएको प्रदेशको संख्यालगायतका विषय पुनः विवाद बनेर बल्झिएका छन् ।
यसरी विवाद समाधान हुनुको सट्टा झन्झन् बल्झँदै जानुले समिति विवादमा परेको मात्र होइन, यसको औचित्यता र अधिकार क्षेत्रका विषयमा समेत चर्को बहस भैरहेको छ । समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराई समितिका सभापति बढी हुन् कि एमाओवादीका नेताचाहिँ बढी हुन् भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ । तथापि, सहमति गर्ने विषयमा डा. भट्टराईको भूमिका र उनको संविधान जसरी पनि बन्नुपर्छ भन्ने अठोटलाई धेरैले सराहना नै गरेका छन् । भट्टराईमाथि अघिल्लो संविधानसभा विघटन गराएको आरोप उनका विपक्षीहरुले लगाइरहेका
छन् । त्यो आरोपबाट मुक्त हुन चाहेकाले पनि हुन सक्तछ, भट्टराई संविधान निर्माणको सवालमा तुलनात्मक रुपमा इमानदार छन्, तर सार्थक परिणाम ननिस्केसम्म भट्टराईको त्यो इमानदारिताको
पुष्टि हुँदैन ।
त्यसो त, सहमति हुन नसक्नुमा सभापति भट्टराई मात्र दोषी छैनन्, उनीभन्दा दोषी सत्ताधारी दलका नेता छन् । अनि, सत्ताधारी दलका नेताभन्दा पनि ठूला दोषी मधेसवादीसहित २२ वटा दलका नेताहरुलाई बोकेर हिँडेका उनकै गौरवशाली पार्टीका उनैका आदरणीय अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड छन् । यसैले घटीबढी भए पनि सहमति नहुनुका दोषी सबै ठूला दल हुन् । तर, सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै एकले अर्कोलाई मात्र दोषी देखाएर अतिवाद प्रदर्शन गरिरहेका छन् । एउटा समूहमात्र दोषी भएर संसारमा कतै पनि विवाद हुँदैन, जुनसुकै विवादमा पनि दुईपक्षीय वा बहुपक्षीय भूमिका हुन्छ । तर, अरुमात्र दोषी आफूचाहिँ पानीमाथिको ओभानो देख्ने दृष्टि–भ्रमको अतिवादको खोक्रो दाबी प्रदर्शन भैरहेको छ । यही खोक्रो अतिवाद नै संविधानका विषयमा सहमतिको मुख्य बाधक हो ।
हाम्रा नेताहरुको बोलीको ठेगान छैन भनेर पहिलेदेखि नै भनिँदै आएको कुरा हो । त्यसमा पनि पछिल्लो समय त यो रफ्तार बढेको छ । नेताका बोलीहरु विचित्रसँग फेरिएका छन् । हिजो बहुमतमा जाऊँ भन्नेहरु आज सहमतिमा जाऊँ भनिरहेका छन् भने हिजो सहमतिमा जाऊँ भन्नेहरु चाहिँ आज बहुमतको कुरा गरिरहेका छन् । हिजो ११ प्रदेशमा समेत सहमति गर्छु भन्नेहरु आज ४ प्रदेशतिर झर्ने कुरा पनि गरिरहेका छन् भने हिजो आफ्नो घोषणापत्रमा सहमतिमा नसके बहुमतीय प्रक्रियाबाट भए पनि संविधान जारी गर्छु भन्नेहरु आज बहुमतीय पद्धतिको नामै सुन्न चाहिरहेका छैनन् । हिजो प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भन्नेहरु संसदीय प्रधानमन्त्रीको वकालत गर्न पुगेका छन् । सबै दलले आफ्ना चुनावी घोषणापत्रलाई एक वर्ष पनि नपुग्दै बिर्सेका छन् । प्रवृत्ति र मानसिकता उस्तै छन्, मात्र पात्रका भूमिका सट्टापट्टा भएका छन् ।
माघ ८ मा संविधान नबन्ने कुराले दलहरुमा अन्यौल थपिएको छ भने आमजनतामा निराशा बढ्न थालेको छ । जब उत्साह निराशामा परिणत हुन्छ, तब त्यो निराशालाई समयमै सम्बोधन गर्न सकिएन भने निराशा आक्रोशमा परिणत हुन्छ । आक्रोशको आगो बल्यो भने त्यसले प्राप्त उपलब्धिमाथि समेत प्रश्नचिन्ह खडा गरिदिन्छ । त्यसैले, आक्रोशको आगो दन्कनुअगाडि नै निराश जनतालाई पुनः आशा र उत्साहतर्फ फर्काउनुपर्दछ । यो काम अरुबाट सम्भव छैन, संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ठूला दलहरुबाट मात्र सम्भव छ ।
तर, दलहरुबीच तीव्र ध्रुवीकरण भैरहेको छ, यो भविष्यको शुभसंकेतको लक्षण होइन । यदि साना दलहरुले भनेझैँ सत्ताकै लागि संविधानलाई बन्धक बनाएको हो भने योभन्दा अदूरदर्शिता राजनीतिमा अर्को कुनै हुँदैन । हो, राजनीतिमा कहिलेकाहीँ ‘पावर शेयरिङ’को पनि कुरा आउँछ, तर त्यो हरेक ठाउँमा हुन सक्तैन । संविधान निर्माणजस्तो गम्भीर विषयमा पनि सत्ताको ‘पावर शेयरिङ’सँग जोड्ने धृष्टता गरिएको हो भने यो राजनीतिक अपरिपक्वताको चरम नमुना हो ।
दलहरु अहिले कुहिरोको काग भएका छन् । आफैँले सिर्जना गरेको कृत्रिम कुहिरोमा आफैँ हराएका
छन् । अरुको अस्तित्व मेटाउन मरिमेट्दा आफ्नै अस्तित्व धरापमा पारिरहेका छन् । आफैँमा आफैँ हराउने जस्तो नियति अर्को हुँदैन । आफूले थापेको जालमा आफैँ पर्नुको चरम पीडा पनि सायद संसारमा अर्को केही हुँदैन । आफैँसँग हार्नुको जस्तो अर्को ठूलो हार पनि कुनै हार हुँदैन । दलहरु यतिबेला आफैँ आफ्नो शिकार भैरहेका छन्, आफ्नो पासोमा आफँै परिरहेका छन् र आफूसँग आफँै हारिरहेका छन् । यो स्थितिबाट उम्कन नसके फेरि पनि संविधान कल्पनामा मात्र सीमित रहन्छ ।
संविधान सहमतिमा लेख्ने कि बहुमतमा लेख्ने भनी विदेशी नेताहरुले भनिदिनु परेको छ । सहमति वा विधि र प्रक्रियाको बुटी अरुले घोटेर पिलाइदिनु परेको छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा चरम स्खलन देखा परेको छ । नेताहरु स्वयम्मा युद्धमोर्चामा हारेका सिपाहीजस्ता भएका छन् । तैपनि, हारको विक्षिप्ततामा निस्केका चर्का स्वर यदाकदा सुनिन्छन्, जो सब कृत्रिम लाग्दछन् ।
न सत्तापक्षले भनेजस्तो बिनासहमति बहुमतीय प्रक्रियाले संविधान बन्ला, न त एमाओवादी मोर्चाले भनेजस्तो वाक्कलाग्दो सडक आन्दोलनले संविधान निर्माण प्रक्रियालाई कुनै सघाउ पु¥याउला । यस्तो दिशाहीन र कलाविहीन नाटकमा किन दलहरु लागिरहेका छन् ? के यो नाटक दलहरुले नबुझेका होलान् र ? पक्कै पनि बुझिरहेका छन् । नेताले मात्र होइन, जनताले पनि बुझेका छन् । जनता अब भ्रममा छैनन् । संविधान बनाउने कुरामा लचक नहुने हरेक दलको हिसाबकिताब जनताले राखेका छन् र भविष्यमा पनि राख्नेछन् । यदि दलहरुले आफ्नो हिसाबकिताब आफैँ मिलाएर जनसमक्ष राख्दैनन् भने त्यसको सन्तुलन फेरि पनि जनताले मिलाउँछन् र क–कसको हैसियत के हो भन्ने कुरा बताइदिन्छन् । तर, भन्नु यत्ति हो कि अब त्यो स्थिति आउन दलहरुले दिनुहुँदैन । जनताको कठोर निर्णय दलहरुले पर्खिनु हुँदैन । भकुन्डो दलहरुकै कोटमा हुँदै दलहरुले गोल गर्नुपर्छ ।